News - Azịza nke ajụjụ banyere nkenke ngwá ọrụ ebu
Azịza nye ajụjụ banyere nkenke ngwá ọrụ ebu
1. Kedu ụdị akụrụngwa ịchọrọ iji etching anwụ?
A: ọ dabere na ngwaahịa na njirimara ihe. Ngwaahịa enwere ike ịkụ ọkpọ na-aga n'ihu nwere ike iji igwe na-anwụ anwụ (yana ọrụ ndị mejupụtara), dị ka: teepu nrapado ihu abụọ, mpempe akwụkwọ mgbasa ozi, ngosiputa eji na ngwaahịa data eletrọniki; otu ngalaba ngalaba na-eji ngwa ngwaike, ọkpọ hydraulic, igwe biya maka igbe agba, ntụpọ desktọọpụ ntuziaka, wdg.
2. Otu esi ahazi ngwa ọrụ na nlekọta anya?
Azịza: n'ozuzu dịka ndị ahịa na eserese (1: 1) iji mee ka ngwa ọrụ ahụ. (ọ bụrụ na ihe ziri ezi chọrọ adịghị elu, a ga-enye ihe atụ). Okpukpo na ihe onwunwe nke ihe onye ahia na-achoputa usoro mmeputa nke onwu (dika: mma di nma, otu uzo di nma, akwa di elu na nke di ala, mma uzo abuo, na ndi ozo).
3. Mmepụta ike na akporo nke ngwá ọrụ ebu?
Azịza: ngwá ọrụ ebu nwere ike ime ka ụdị nile nke oge ufodu ndịna, na ngwaahịa ndidi nwere ike ịbụ ezi ihe n'ime within 0.03mm. A na-eji ya na bọọdụ sekit na-agbanwe agbanwe, ngwa ụlọ, ekwentị mkpanaaka, akụkụ akpaaka, ngwaahịa dijitalụ, ụlọ obibi akwụkwọ na ụlọ nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa plastik, gasketị gasị, ihe egwuregwu ụmụaka, ihe nkedo onwe onye na mpaghara ndị ọzọ. Company'slọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ elekere 24 na-eme ka ịdị mma na arụmọrụ dị mma, ma hụ na nnyefe oge.
4. Mmepụta okirikiri nke ngwá ọrụ ebu?
A: bụrụ na usoro nke ngwa ngwa, dịka nha ngwaahịa ahụ, enwere ike ịhazi mbupu ngwa ngwa elekere 4 mgbe ị natara iwu ahụ (ezigara nkwenye ntinye). N'okpuru ọnọdụ nkịtị, enwere ike ịnapụta ngwongwo n'echi ya.
5. Ekwe omume nke omimi akara punching na ngwá ọrụ anwụ?
Azịza: ngwá ọrụ anwụ ọnwụ ọnwụ blanking ọrụ ule ihe iji debug, ahụmahụ na-ekpebi ngwaahịa mmetụta. Ogologo kachasị nke etching die nwere ike ịbụ 2mm. Ọ bụrụ na ngwaahịa ihe dị oke oke ma sie ike, oghere oghere ahụ meghere ma oghere ahụ dị oke warara, a gaghị atụ aro ka ị jiri ngwa ngwa etching, kama iji ihe osise ihe osise. Enweghị ike idozi mpempe akwụkwọ mebiri emebi nke etching tool, yana enwere ike imegharị ya maka nrụzi.
6. Production ikike na ngwa akporo nke osise ngwá ọrụ ebu?
A. na osise ngwá anwụ nwere ike iji mee ka zọọ oké ihe na post ekweghị ekwe (dị ka EVA ụfụfụ, ogbo, nile di iche iche nke plastic ịse, mica mpempe akwụkwọ, egbochi ihe onwunwe, wdg) The kacha nta nwechapụ nke osise anwụ nwere ike ịbụ 0.6 mm maka otu mma n'akụkụ na 0.6 mm maka oghere oghere. Mma dị elu na nke dị ala, otu akụkụ akụkụ, mma dị iche iche dị mma (dịka ihe 8mm) nwere ike ịbụ 5mm ma ọ bụ karịa. Nnukwu uru bụ na stamping ugboro dị elu na agụba nwere ike idozi okirikiri.
Ebibi-Drop ịrụzu Rotary Die, Steel Die osise, Nchekwa onwe-ihe ijuputa osise Die, Ulo Oru enyo enyo, Laser anwụ, Nkpuchi Rotary Nwụrụ,